नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषण (आइतवार, २६ जेठ २०७६) | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषण (आइतवार, २६ जेठ २०७६)
on: June 09, 2019 नेप्से विश्लेषण, लगानी
नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषण (आइतवार, २६ जेठ २०७६)
बजार सारांश (जेठ २३, २०७६)
गत साता नेप्से परिसूचक ३४ दशमलव ८८ अंक (२.६४ प्रतिशत) घटेर १२८४ दशमलव ५९ मा बन्द भएको छ । अहिलेको समयमा नेप्से परिसूचक ५० र २०० दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा मााथि चलिरहेको छ, जसले दीर्घकालीन अवधिमा बुलिश मोमेन्टमको संकेत गरेको छ । पछिल्लो हप्ता दैनिक औसत कारोबार रकम रू. ८६ दशमलव ४७ करोड रहेकोमा गत साता कारोबार रकम घटेर रू. ६८ दशमलव ९० करोड भएको छ । पछिल्लो समयमा १० दिनको मुभिङ एभरेजले मजबूत टेवाको काम गरिरहेको थियो, तर गत साता नेप्सेले १० दिनको मुभिङ एभरेजलाई मथिबाट तल काटेको छ । अहिलेको समयमा नेप्से परिसूचक ११०२ देखि १३४९ को स्विङको २३ दशमलव ६ प्रतिशत फिबोनाची रिट्रेसमेन्टभन्दा तल चलिरहेको छ । बिहीवार नेप्से बियरिश प्रवृत्तिको मैनबत्ती बनाएर बन्द भएको छ ।
गत साताको नेप्से परिसूचकले बियरिश मोमेन्टम देखाएको छ । साप्ताहिक औसत कारोबार रकममा आएको कमीले बजारमा लगानीकर्ताको सहभागिता घटिरहेको संकेत गरेको छ । हालको अवस्थामा नजीकको टेवा अंक तथा प्रतिरोध अंक क्रमशः १२३० तथा १२९० रहेको छ ।
क)मुभिङ एभरेज कन्भर्जेन्स डाइभर्जेन्स (एमएसीडी)
एमएसीडीमा मा दुईओटा रेखा हुन्छन्, जसमा एउटा रेखाले बजारको दिशा परिवर्तनको संकेत गर्छ भने अर्कोे रेखाले बजारको प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) देखाउने गर्छ । यदि एमएसीडी रेखाले सिग्लन रेखालाई तलबाट माथि काटेमा यसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिइन्छ । यसले शेयरहरू किन्ने संकेत गर्दछ भने एमएसीडी रेखाले सिग्लन रेखालाई माथिबाट तल काटेमा यसलाई नकारात्मक संकेतका रूपमा लिइन्छ र यसले शेयरहरू बेच्ने संकेत गर्दछ ।
गएको साताको शुरूमा एमएसीडी लाइन र सिग्नल लाइन क्रमशः १७ दशमलव शून्य ९ र २१ दशमलव ३९ बिन्दुमा रहेको थियो । साताको अन्त्यसम्म एमएसीडी लाइन र सिग्नल लाइन ८ दशमलव ६५ र ५ दशमलव ९५ बिन्दु घटेर क्रमशः ८ दशमलव ४४ र १५ दशमलव ४४ बिन्दुमा रहन पुग्यो । अहिलेको समयमा एमएसीडी लाइन र सिग्नल लाइन दुवै घटिरहेका छन् । तर अहिले पनि एमएसीडी लाइन र सिग्नल लाइन दुवै पोजिटिभ जोनमा जोनमा चलिरहेका छन् । एमएसीडी लाइन र सिग्नल लाइनबीचको दूरी बढिरहेकाले बजारमा बियरिश मोमेन्टम हावी रहेको संकेत गरेको छ ।
प्राविधिक विश्लेषणको यस्तो सूचक हो, जसलाई साइडवेज रूपमा चलिरहेको बजारमा शेयर किनबेच गर्न बढी उपयोगी मानिन्छ । त्यसैगरी यसले बजारमा खरीद र विक्रीको स्पष्ट संकेत देखाउने गर्दछ ।
गएको साताको शुरूमा आरएसआई ६५ दशमलव ४७ अंकमा रहेको थियो । गएको साता आरएसआई १८ दशमलव ९१ अंक घटेर ४६ दशमलव ५५ अंकमा बन्द भएको छ । गएको साता आरएसआई ५० को लाइनलाई ब्रेक गरेर तल आएको हुनाले बियरिश मोमेन्टमको संकेत गरेको छ ।
बोलिंगर ब्यान्ड एक प्राविधिक विश्लेषण सूचक हो, जसमा २० दिने मुभिङ एभरेजका साथ दुई ब्यान्ड (एउटा माथि र एउटा तल) हुन्छन् । यी ब्यान्डहरूले बजरको अस्थिरताको मात्रा संकेत गर्दछन्, जुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएशन गणना गरेर पत्ता लगाइन्छ ।
गएको साता नेप्से परिसूचक मध्यम ब्यान्डबाट घटेर तल्लो ब्यान्डतिर गएर बन्द भएको छ । साथै माथिल्लो तथा तल्लो ब्यान्डबीचकोे दूरी कम भएकाले बजारमा अस्थिरता कम भएको संकेत गरेको छ ।
अन ब्यालेन्स भोल्युम एक मोमेन्टम सूचक हो, जसले बजारको भोल्युमलाई प्रयोग गरेर मूल्य आकलन गर्न मद्दत गर्दछ । अन ब्यालेन्स भोल्युमको मात्रा बजार बढेको दिनको भोल्युमलाई जोडेर र बजार घटेको दिनको भोल्युमलाई घटाएर निकालिन्छ । गत साताको शुरूमा ओबीभी –३ दशमलव १ अर्बमा रहेको थियो । साताको अन्त्यसम्म ओबीभी ३ दशमलव ६ अर्ब घटेर –६ दशमलव ७ अर्बमा बन्द भयो । गत साता ओबीभी ३ दशमलव ६ अर्ब घटेको हुनाले बजारमा विक्रीको चाप बढेको संकेत गरेको छ ।
गत साता नेप्से परिसूचक ३४ दशमलव ८८ अंक (२ दशमलव ६४ प्रतिशत) घटेर १२८४ दशमलव ५९ मा बन्द भएको छ । अहिलेको समयमा नेप्से परिसूचक ५० र २०० दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा मााथि चलिरहेको छ, जसले दीर्घकालीन अवधिमा बुलिश मोमेन्टमको संकेत गरेको छ । एमएसीडी लाइन र सिग्नल लाइनबीचको दूरी बढिरहेकाले बजारमा बियरिश मोमेन्टमा हावी रहेको संकेत गरेको छ । आरएसआई ५० को लाइनलाई ब्रेक गरेर तल आएको हुनाले बियरिश मोमेन्टमको संकेत गरेको छ । ओबीभी ३ दशमलव ६ अर्ब घटेकाले बजारमा विक्रीको चाप बढेको संकेत गरेको छ । बोलिंगर ब्यान्डले बजारमा अस्थिरता कम भएको संकेत गरेको छ । हालको अवस्थामा नजीकको टेवा अंक तथा प्रतिरोध अंक क्रमशः १२३० तथा १२९० रहेको छ ।